जनतासमाचार डट्कममा आज (बिहीवार) प्रकाशित समाचारका मुख्य अंशहरू :
१.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम संविधान विपरित भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताएका हुन् ।
२.नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदमका साथै संघीयता, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध भएको बताउनुभएको छ । विहीवार काठमाडौंमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले ओली पहिलेबाटै गणतन्त्रविरोधी भएको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओेली लोकतान्त्रिक आचरण नै नभएको अहंकारी व्यक्ति भएको उहाँको भनाइ थियो ।
३.जनताले झण्डै दुई तिहाइ जनमतका साथ सत्ताको शिखरमा चढाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएपछि स्थिरताको अपेक्षा गरिएको नेपाली राजनीतिले गन्तव्य बदलेको छ । जनताले भरोसा गरेर संसदमा पठाएको पार्टी त फुट्यो-फुटयो, लोकतन्त्रको जग मानिने संसदको भविष्यसमेत अन्योलग्रस्त बनेको छ । यससँगै जनतालाई नेकपाले बाँडेका सुख, खुशी, समृद्धी र नयाँ नेपालका नाराहरु पनि विलखबन्दमा परेका छन् ।
४.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विद्यमान राजनीतिक संकटको कारण नेकपा भित्रको पार्टी प्रणाली रहेको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्नुहुँदै पोखरेलले पार्टी प्रणालीमा गरिने सुधार नै नयाँ एकताको आधार बन्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
५.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केपी शर्मा ओली समूहले मूल पार्टीको वैधानिक मान्यता आफुहरुलाई दिन निर्वाचन आयोगमा दाबी पेश गरेको छ । आफ्नो समूह नै मुल पार्टी रहेको दाबी गर्दै ओली समूहमा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, महासचिव विष्णु पौडेल, सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङसहितका नेताहरु बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेर जवाफ पेस गर्नुभएको हो ।
६.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा आफना तर्फबाट बहस गर्न केही राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको अभियान चलाइरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई राख्नुभएको छ । अधिवक्ताहरु बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी र विष्णु भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउमा बहस गर्ने भएका हुन् ।बहुसंख्यक राजनीतिक दल, स्वतन्त्र समूह र नागरिक समाज लगायतले संसद विघटनको घटनालाई प्रतिगामी कदम भनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको अभियान चलाइरहेका वकिललाई निजी वकिलका रुपमा रोज्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
७. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालका विभिन्न जातजाति तथा समुदायद्वारा मनाइने माघे संक्रान्ति एवं माघी पर्वका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ । राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा माघे संक्रान्ति पर्वकाे अवसरमा सुख, शान्ति, समृद्धि, आरोग्य र प्रगतिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे हाे ।
८. गण्डकी प्रदेश सरकारको घरवास (होम स्टे) पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि यस वर्ष जिल्लाका तीन सामुदायिक घरवास छनोटमा परेका छन् । घरवासका पूर्वाधार विकास, क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तीकरणका लागि परियोजना प्रस्तावसमेत स्वीकृत भइसकेका छन् ।
९.जिल्ला कारागार खाँदबारीमा क्षमताभन्दा ५ गुणा बढी कैदीबन्दी राख्दा समस्या भएको छ । २५ कैदीको क्षमता भएको कारागारमा १ सय ४३ कैदीबन्दी राख्नुपरेको कारागारका प्रमुख विनोद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । कारागारमा १ सय ३४ पुरुष र नौ महिला कैदीबन्दी छन् । ती मध्ये १२ ज्येष्ठ नागरिक छन् । कारागार ३.५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा कैदीबन्दी राख्दा बन्दीको व्यक्तित्व विकास, सीप विकास तथा कला विकासका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएको जनाइएको छ ।
१०. काठमाडौं महानगरपालिकाले उज्यालो काठमाडौं कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ६० किलोमिटर सडक क्षेत्रमा आधुनिक बत्ती जडान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु-याएको छ । यसअन्तर्गत करिब ८० स्थानमा उच्च मात्रामा प्रकाश दिने बत्ती (हाइमास्ट लाइट) जडान गर्नेलगायतका केही महत्वपूर्ण कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ ।
११.राष्ट्रिय योग दिवस मूल समारोह समितिको आयोजनामा आज दिवस मनाइएको छ । ‘गरौँ योग डटेर, कोभिड जान्छ हटेर’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिवस मनाइएको हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीगण, उच्च कर्मचारी, योगगुरु, अभ्यासकर्ता, शिक्षाकर्मीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । दिवस मनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको थियो ।
१२.इन्डोनेसियाको एक गुफामा ४५ हजार पाँच सय वर्ष पुरानो भित्तेचित्र भेटिएको छ । गुफामा भित्तामा कोरिएको ५३ इन्च चौडाइ र २१ इन्च लम्बाइ भएको जंगली सुँगुरको चित्र भेटिएको हो । गाढा रातो गेरु रङ्ग प्रयोग गरी कोरिएको चित्र सुलावेसी द्वीपको एउटा दुर्गम उपत्यका रहेको लिएङ टेडोङ्गे गुफामा भेटिएको हो।पुरातत्त्वविद्हरूले खोज अनुसन्धानका क्रममा चित्र फेला पारेको बीबीसीले जनाएको छ ।
१३.परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली आज बिहान भारतको राजधानी नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा भाग लिने प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ज्ञवाली दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको हो ।
१४.जनताले झण्डै दुई तिहाइ जनमतका साथ सत्ताको शिखरमा चढाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएपछि स्थिरताको अपेक्षा गरिएको नेपाली राजनीतिले गन्तव्य बदलेको छ । जनताले भरोसा गरेर संसदमा पठाएको पार्टी त फुट्यो-फुटयो, लोकतन्त्रको जग मानिने संसदको भविष्यसमेत अन्योलग्रस्त बनेको छ । यससँगै जनतालाई नेकपाले बाँडेका सुख, खुशी, समृद्धी र नयाँ नेपालका नाराहरु पनि विलखबन्दमा परेका छन् ।
१५. भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या एक करोड पाँच लाख भन्दा बढी पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १६ हजार नौ सय ४६ जना नयाँ संक्रमित भेटिएसँगै बिहीबारसम्म संक्रमितको संख्या एक करोड पाँच लाख १२ हजार ९३ पुगेको हो ।
१६.नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चढेको हेलिकप्टर गोरखामा आकस्मिक अवतरण गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर गुरूङका अनुसार खराब मौसमका कारण हेलिकप्टरलाई आकस्मिक अवतरण गरिएको हो ।
१७.भक्तपुर बालकोटकी कामना निरौलालाई कुन चाड कहिले पर्छ खासै हेक्का हुँदैन । त्यसो त बहुजातीय र बहुभाषिक अनि बहुसांस्कृतिक देश नेपालमा चाड पर्वहरु पनि धेरै छन् । त्यसैले कुन चाडपर्व कहिले पर्छ ? भन्नेबारे सम्झन चाहेर पनि सम्भव छैन । यस्तोमा रेडियो र चाडपर्व सम्बन्धित गीत संगीतले सहयोग गर्ने गरेको एक निजी बैंकमा कार्यरत कामनाको अनुभव छ । उनी भन्छिन्–सम्बन्धित चाड पर्वको आसपासमा रेडियोहरुले त्यही चाडपर्वका गीत संगीत प्रसारण गरिदिन्छन् । त्यहीबाट ए फलानो चाडपर्व आइसकेछ है भन्ने लाग्छ ।
१८.आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघको तदर्थ समिति घोषणा गरिएको छ । काठमाडौंमा आज (बिहीबार) एक घोषणा कार्यक्रमको आयोजना गरी राजन मुकारुङको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति घोषणा गरिएको हो । आदिवासी जनजाति समुदायका भाषालाई जोडदार रुपमा लेखन गर्न, तिनका मौखिक साहित्यलाई लिखित गर्न गराउन सम्बन्धित जाति, समुदायका स्रष्टालाई उत्प्रेरित गर्ने र त्यस कार्यमा अग्रसर गराउने उद्देश्यले समिति बनाएको महासंघले जनाएको छ । नेपालका सबै मातृभाष र साहित्यलाई नेपाली हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नका लागि पनि आफूहरु एक हुनेपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
१९.माघी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बसोबास गर्ने थारु समुदायले मनाउने पर्वहरुमध्येको एक पर्व हो । अनादिकालदेखि तराई र भित्री तराईमा बसोबास गर्दै आएका थारुहरुले माघी मनाउँछन् । यसको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्ने यकिन नभए पनि थारु समुदाय अस्तित्वमा आएदेखि सुरु भएको विश्वास गरिन्छ । प्रत्येक वर्ष माघ १ गते माघी पर्व धुमधामका साथ मनाउने चलन रहिआएको छ । यो माघ महिनामा मनाउने भएकाले यसलाई माघी, तिला संक्रान्ति, मकर संक्रान्ति, माघे संक्रान्ति, खिचरी, माघ र लाइ पर्वका नामले पनि चिन्ने गरिन्छ ।
२०.चाडपर्व, रीतिरिवाज, र संस्कृतिले धनी हामी नेपाली अनेक चाडपर्वहरु मनाउने गर्दछौँ । संस्कृति झल्काउन र सम्वद्र्धन गर्न, आफन्त इष्टमित्रहरुबीच मिलाप गराउन र दु:ख सुख आदनप्रदान गर्नका लागि चाडपर्व एउटा राम्रो अवसर पनि हो । हाम्रा प्रत्येक चाडपर्वहरुको आफ्नैविशेषताहरु रहेका छन् । यी चाडपर्वहरुमा हामीले उपभोग गर्ने खाद्य वस्तुको पनि आफ्नै विशेषता र महत्व रहेको छ ।
२१.रोजगारविहीन भएर सडकमा भौतारिईरहेका व्यक्तिहरुलाई हाम्रो टिम नेपालले माघी पर्व तथा माघे संक्रान्तिको अवसरमा खानेकुरा वितरण गरेको छ । बिहीबार थापाथलीमा रोजगारीविहीन भई भौतारिइरहेका व्यक्तिहरुलाई माघे सक्रान्तिको अवसरमा हाम्रो टिम नेपालले खानेकुरा वितरण गरेको हो ।
२२.नेपालीको प्रमुख चाडमध्ये माघे संक्रान्ति पनि एक महत्वपूर्ण पर्व हो । माघे संक्रान्तिलाई तराईमा माघि पनि भनिन्छ भने यसलाई मकर संक्रान्तिको रुपमा पनि चिनिन्छ । माघे संक्रान्तिमा विशेष गरेर घ्यू चाकु, तिलको लड्डु, भुजाको लड्डु, मासको फुरौला, तरुल, पिडालु लगायतका खानेकुरा बनाएर खाने गरिन्छ । विशेष गरेर काठमाडौंमा माघे संक्रान्तिमा चाकुकाे महत्व बढी हुने गरेको पाइन्छ ।
२३. नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आइपीओ माघ २ गतेदेखि खुल्ने भएको छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आइपीओ नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक लिमिटेडको खुल्ने भएको हो। बैंकले भोलि शुक्रवारदेखि कूल ८ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न लागेको हो ।
२४.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले देशको आर्थिक विकासका निम्ति प्राथमिकताको क्षेत्रहरु किटान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
२५. नेपाली कमेडियनहरुले भ्रष्टचार र भ्रष्टचारी प्रवृत्ति माथि व्यङ्ग्य गरेका छन् । जनता टेलिभिजनमा प्रत्येक बुधबार प्रसारण हुने ‘नेपाली कमेडि शो’ काे नयाँ श्रृङ्खलामा हाँस्य कलाकालहरुले भ्रष्टचार प्रवृत्ति माथि व्यङ्ग्य गरेका हुन् ।
२६.कमल पोखरी पुनर्निर्माणमा कृतिम संरचना तथा ढुंगा र क्रंक्रिटको प्रयोग भएको भन्दै स्थानीयको जनगुनासो आएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीयसँगको छलफलमै कमल पोखरीको संरचना बनाउन लागेको बताएको छ ।
२७.इलाम नगरपालिका पाँच मान्द्रेनीका किसान सामवेद चापागाईं आफ्नो बारीमा भएको सुन्तलामा रोग देखा परेकाले वैकल्पिक खेती थालेका छन् । सुन्तलाबाट अपेक्षा अनुसार आम्दानी नभएपछि उनले अलैँची, अदुवा जस्ता अन्य खेती लगाउन थालेका हुन् ।
२८.थारु जातिको मुख्य पर्व माघी काठमाडौँ लगायत देशभर मनाईएको छ । हरेक वर्ष माघको पहिलो दिन थारु जातिले माघी पर्व मनाउने गर्दछन् । यस वर्ष पनि काठमाडौँ लगायत थारुहरुको बाहुल्यता भएको विभिन्न ठाउँमा माघी पर्व मनाईएको छ ।
२९ नेपालमा थप चार सय तीन जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा पाँच हजार ३२ जनाको पीसीआर परीक्षणमा चार सय तीन जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।
३०.कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लामो समय बन्द भएका सिनेमा हल पुन: तंग्रिन थालेका छन् । पुस १० गतेबाट सञ्चालनमा आएका सिनेमा हलमा विस्तारै दर्शकहरुको उपस्थित बढ्दै गएको हाे ।
३१.दाङको घोराहीबाट हराएको मोटरसाइकल कपिलवस्तुमा फेला परेको छ । दाङ घोराही उप महानगरपालिका १२ रमनाका नरेश बुढाको गत भदौँ २४ गते हराएको होण्डा साइन मोटरसाइकल असोज ११ गते कपिलवस्तुको जंगलमा फेला परेको हाे ।
३२.नेपाली कांग्रेस अछामका नेता धर्मराज देवकोटाको निधन भएको छ । नेता देवकाेटाकाे उपचारकाे क्रममा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा निधन भएकाे हाे ।
३३.युवा गायक जोसेफ शाही ठकुरीको देउडा शैलीको गीत ‘पियारी’ सार्वजनिक भएको छ । लाइमलाइट नेपाल युट्युव च्यानलबाट बिहीबार गीतको भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो ।